प्राचण्डलाइ अब बौलाहा नबन्नुस भन्दै पौडेलको यस्तो सम्म भने::देश र जनताप्रति समर्पित
शुक्रबार दिउँसो २ बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एक हलमा नेपाली राजनीति र साहित्यका धुरन्धर व्यक्तित्व उपस्थिति भए । कार्यक्रम थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्माद्वारा लिखित निबन्धसंग्रह ‘झरीको सौन्दर्य’को लोकार्पण । साथमा शमी साहित्य मासिक पत्रिकाको विमोचन पनि थियो । ‘झरीको सौन्दर्य’ शर्माको ७ औँ कृति हो ।
अनि मञ्चको अग्रपंक्तिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता राचन्द्र पौडेल र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलगायतका व्यक्तित्व आसीन भए । कार्यक्रममा केहिव्यक्तीहरु बोलिसकेपछि पालो आयो काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको ।
उनिभन्दा अगाडी बोलेका वक्ताले भनेझै उनले पनि साहित्यकार अर्धपागल हुने बताए । उनले प्रचण्ड पनि अर्धपाग भएरै क्रान्ति गरेको बताए । पौडेलले भने, ‘साहित्यकार अर्धपागल हुन्छन् भनिन्छ, प्रचण्डजी पनि क्रान्ति गरेर आउनुभयो। उहाँ पनि अर्धपागल भएरै त क्रान्ति गर्नु भएको होला नि।’
उनले भने, ‘काँग्रेसले हिजोका कुरा र नेकपाले भोलीको कुरा गर्छ, साहित्यले आजको कुरा गर्छ । त्यसैले पनि साहित्यको विकास आवश्यक छ ।’ उनले अब प्रचण्डलाई बौलाउन नहुने तर्क गरे । पौडेलले भने, ‘प्रचण्ड पहिले नै बौलाइसके । प्रचण्डले कति बौलाउने, उहाँ बौलाउँदा यत्रो भइसक्यो । अब बौलाउने बेला होइन ।’
पौडेलको यही भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले उनको नाम नलिई आफू अर्धपागल भएर विद्रोहमा लागेको स्वीकार गरेका हुन्।
आखिर के हो ! प्रचण्डको पुरा नभएको मिसन ?
प्रचण्डले पढ्ने बेला नभएको ‘मेरो सरकार’ कसले कति बेला थप्यो ?